Baarlamanka federaalka ah oo u codeynaya mooshinka ka dhanka ah baarlamanka Juba – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlamanka federaalka ah oo u codeynaya mooshinka ka dhanka ah baarlamanka Juba
Mareeg.com: Barlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta kulan ku yeelanaya xarunta golaha Shacabka muddo todobaad kadib ayaa lagu wadaa in looga hadlo ajandayaal dhowr ah oo uu ka mid yahay u codeynta mooshin ka dhan ah baarlamaanka maamulka Juba oo sharcinimadiisa dood ka jirto.
Habdhowraha Baralmaanka Xildhibaan Maxamed Cumar oo lahadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulankii ugu dambeeyey ay baarlamaanka ka hadleen in cod la geliyo codsiga Ra’iisul wasaaraha, inkasta oo uusan buuxsamin kooramkii loo baahnaa, waxaana uu intaa ku daray in ajandaha uu yahay sidii cod loo gelin lahaa mooshinka laga keenay Wakiilada Maamulka Jubbaland.
Lama oga go’aanka kasoo bixi doona baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoo laga cabsi qabo in go’aan kasta ee soo baxa uu muran hor leh abuuro.
John Kerry oo isbitaal u galay shil baaskiil
Tirada dadkii ay laayeen Liyuu Booliska Itoobiya oo la shaaciyey